Tag: paikady marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Tag: paikady marketing amin'ny atiny
Manana olana goavana eo amin'ny sehatry ny atiny izahay. Saika ny loharanom-pahalalana rehetra novakiako momba ny varotra atiny dia mifandraika amin'ny fahazoana mpitsidika vaovao, fanatrarana mpihaino vaovao ary fampiasam-bola amin'ny fantsom-baovao mipoitra. Paikady rehetra ny fahazoana izany. Ny fahazoana ny mpanjifa no fitaovana miadana indrindra, sarotra indrindra, ary lafo amin'ny fampitomboana ny vola miditra na inona na inona indostria na karazana vokatra. Fa maninona no very io zava-misy io amin'ny paikady marketing amin'ny atiny? Mora 50% eo ho eo
Inona no atao hoe Fahefana Votoatiny?
Alahady, Martsa 8, 2015 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Hanoratra zavatra bebe kokoa momba ny fahefan'ny atiny izahay, saingy te hampiditra foto-kevitra iray izay napetraky ny maso ivoho niaraka tamin'ny fanampian'ny mpiara-miasa aminay Metonymy Media sy Dittoe PR. Ny mombamomba ny Content Authority Ny fanamby izay tohizanay hatrany miaraka amin'ireo mpanjifanay dia ny toa tsy fisian'ny paikady foana satria manaparitaka ny varotra atiny izy ireo. Altimeter dia nitatitra fa ny 70% -n'ny mpivarotra tsy manana mifanaraka na
Alakamisy, May 16, 2013 Douglas Karr
Fifampitokisana sy fahefana… izy ireo ihany no teny roa izay afovoan'ny tetikady marketing atiny, raha ny fahitako azy. Rehefa mijery Internet ny orinasa sy ny mpanjifa hikaroka ny vokatrao sy ny serivisinao dia mety efa nanapa-kevitra ny hividy izy ireo. Ny fanontaniana dia hoe hividy aminao izy ireo na tsia. Ny varotra atiny no ahafahanao mametraka izany fahatokisana sy fahefana an-tserasera izany. Famonosana ireo loharanom-pahalalana sy dingana iray manodidina ny atiny